३ राम्रा कोरियन थ्रिलर फिल्म, युट्युबमा अंग्रेजी सबटाइटलसहित :: Setopati
३ राम्रा कोरियन थ्रिलर फिल्म, युट्युबमा अंग्रेजी सबटाइटलसहित
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ २४
सन् १९१९ देखि सिनेमा बन्न थालेको कोरियाली सिनेमाले गत वर्ष सय वर्ष पूरा गर्नु एउटा इतिहास थियो। त्यसलगत्तै कोरियाली निर्देशक बोङ जोन हु निर्देशित 'प्यारासाइट'ले कान र अस्करमा प्रमुख विधाका अवार्ड जित्नु अर्को इतिहास बन्यो।
सबटाइटलमै अस्कर जित्ने कोरियाली सिनेमा पछिल्लो तीन दशकमा संसारभरका दर्शक माझ फैलिइसकेको छ।
अप्रत्याशित 'ट्विस्ट' र 'टर्न' दिन सक्ने खुबीका कारण थ्रिलर जनरा मन पराउने दर्शकमाझ कोरियन सिनेमा लोकप्रिय छ। रोचक प्लट बुनाइ र मान्छेका नराम्रा पक्षलाई हदैसम्म हिंसात्मक रुपमा उतार्न दुस्साहस कोरियन थ्रिलरका विशेषता हुन्। 'प्यारासाइट' मा समेत यो विशेषता पाइन्छ।
मनोरञ्जन र दर्शनसम्मका कुरा गर्ने कोरियाली थ्रिलरको स्वाद लिन यो सूचीमा भएका फिल्मले तपाईंमा अन्य कोरियाली फिल्म हेर्ने रूचि जगाउन सक्छ।
यो फिल्म मुख्य ना नाम सु र कांग सुआ पात्र वरिपरि घुम्छ। टेलिभिजनमा गम्भीर खोजमूलक कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सु उनका निर्देशकका कारण भूतको कथा भन्ने कार्यक्रम उत्पादन गर्ने दबाबमा हुन्छन्। यो काममा रुचि नभए पनि कार्यक्रम बनाउन लागेकै बेला उनले एउटा जलेको डायरी भेट्छन्।
यो डायरी सुआले लेखेकी हुन्छिन्। डायरीमा उनलाई कसरी जबर्जस्ती मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरेर मानसिक र शारीरिक यातना दिइयो भन्ने जानकारी हुन्छ।
सुआलाई जबर्जस्ती भर्ना गरिएको यो अस्पताल एक वर्षअघि आगलागीमा परेर बन्द भइसकेको छ। यही समयमा प्रहरी प्रमुख रहेका सुआका बुबा पनि मारिएका हुन्छन्। आफ्नो रूचि अनुसारको कथा भेटेपछि सु टेलिभिजन निर्देशकको इच्छा विपरीत यही घटनामा आधारित भई कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्छन्। यही क्रममा उनी सुआ बस्दै आएको अर्को मानसिक अस्पताल पुग्छन् र सोधखोज सुरु गर्छन्।
फिल्मको सुरुआत सुआलाई अपहरण गरेको घटना देखाइएको छ। उनलाई किन र कसले अपहरण गरेर जबर्जस्ती अस्पताल पुर्‍यायो? अस्पतालमा निर्दोष मानिसहरूलाई पागल करार गरी उनीहरूको अंग बेच्ने काम गर्नुमा कसको हात छ? त्यो आगलागीको घटना कसरी भएको थियो र त्यसमा के भएको थियो?
'इन्सेन'मा यसपछिका घटनाक्रमले यही कुरा बिस्तारमा देखाउँछ।
द चेजर (२००८)
मुख्य तीन पात्र जोंग हो, हा जुंग र महिला सिओ यंगको वरिपरि घुमेको छ, 'द चेजर'।
जोंग हो प्रहरीको जागिरबाट निकालिएका पात्र हुन्। वेश्यावृत्ति सञ्चालकका रूपमा काम गर्ने उनको समय खराब चलिरहेको छ। उनका लागि काम गर्ने एकपछि अर्का महिलाहरू गायब भइरहेका हुन्छन्। यसले उनमा मानसिक र आर्थिक संकट थपिरहेको हुन्छ।
यही बेला एक जना यौन व्यवसायी महिला पठाइदिन भन्दै उनलाई एउटा नम्बरबाट फोन आउँछ। पहिला ग्राहक पठाएकै व्यक्तिको नम्बर भएकोले उनी उसलाई पछ्याउने निधो गर्छन्।
यसका लागि उनी आफ्ना लागि काम गर्ने मि जिनलाई उक्त ग्राहककहाँ जानू तर आफूलाई उसको घरको ठेगाना मोबाइलमा मेसेज गर्नू भनेर पठाउँछन्। आफू बिरामी भए पनि मि जिन आफ्नी सानी छोरी घरमा छाडेर ग्राहककहाँ जान बाध्य हुन्छिन्।
मि जिनलाई लिन आउने ग्राहक योंग मिनले एउटा सुनसान घरमा लिएर जान्छन्। बाथरुम जाने बहानामा मि जिनले जोंग होलाई मोबाइलमा मेसेज गरे पनि नेटवर्कले साथ दिँदैन।
धेरै जनालाई त्यो घरमा लगरे मार्ने सिरियल किलरले योंग मिनले मि जिनलाई पनि मार्लान्? वा जोंग होले उनलाई बचाउन सफल होलान्?
धेरै जनालाई मारेको योंग मिनले सबैलाई किन हतौडाले टाउकोमै हानेर मार्छन्? प्रहरीले पक्राउ गर्दा अपराध स्वीकारेर पनि उनी कसरी सबुत नभएकाले बाहिर निस्कन सफल हुन्छन्? फिल्मलाई यी कुराले रोचक बनाएको छ।
सँगै, सुरूदेखि अन्तसम्म आफ्नो व्यवसाय डामाडोल भएको तनाव लिएर कसरी जोंग हो अपराधीसम्म पुग्ने प्रयत्न गरिराख्छन्? चलाख र डरलाग्दो सिरियल किलरको इतिहास खोतल्न उनले के के गर्छन्?
कान लगायत विभिन्न प्रतिष्ठित महोत्सवमा प्रदर्शन भएको 'द चेजर' को कथा र प्रस्तुति, थ्रिलर रूचाउने दर्शकलाई बाँधी राख्न सफल छ। फिल्मको यही विशेषताले गर्दा यसले विभिन्न विधामा तीसभन्दा बढी अवार्ड जितेको थियो।